Edemede nke Mgbanwe Gbanwee Ozi Companylọ Ọrụ E Kọrọ Ede
Ederede nke ndezigharị chọrọ ka ị gbanwee ozi edekọtara gbasara ụlọ ọrụ gị. Edere ihe ederede na ụlọ ọrụ ode akwụkwọ steeti gị, n'otu ụzọ ahụ na itinye. Isi ihe mere ede akwụkwọ maka mmezi maka ụlọ ọrụ bụ:
Aha Ngbanwe Agbanwe
Gbanwee na Onuche nke Ekere Ihere
Gbanwee na Nweta ọnụahịa nke ụlọ ọrụ
Dingtinye ma obu wepu ndi isi, ndi oru, ndi ahia
A na-etinye akwụkwọ ndezigharị ma dekọba aha gị na ntanetị nke mkpokọta gị. Lọ ọrụ agbakwunyere ga-enyere gị aka na nkwadebe na ntinye nke isiokwu mmegharị na steeti 50 ọ bụla.
Isiokwu nke Ndezigharị Usoro
You nwere ike ịkpọ Companieslọ ọrụ ndị mepere emezi ma nye iwu maka ndozi ọrụ yana ngalaba iwu gị ga-akwado akwụkwọ gị. Inwere ike nyocha ma bịanye aka na mmeghari gị wee, ozugbo anabatara, anyị ga-etinye akwụkwọ ndị ahụ na ọfịs steeti gị. Na mkpokọta steeti niile ga-agbanwe oge ha ga - edetu oge, agbanyeghị, ozugbo itinye akwụkwọ ndekọ aha gị ka aga-emelite ya na mmezi ahụ.
Isiokwu nke Ndezigharị Ọrụ
Na-akwụ naanị ụgwọ ọrụ ọrụ $ 199 na ego nzacha maka steeti gị maka usoro ahụ dum, a ga-agbanwe ihe ndekọ ụlọ ọrụ gị n'otu usoro dị mfe.